FAQ-Nantong GAOYA ígwè Structure CO., LTD.
Nantong GAOYA ígwè Structure CO., LTD.Ọkachamara na emebe,amị na na na wụnye iche iche nke ụlọ,na ndị ọzọ na usoro.
Ị na-rụpụta factory ma ọ bụ trading ụlọ ọrụ?
Anyị bụ ndị rụpụta factory. Ị na-nabatara ileta anyị n'oge ọ bụla. Na ogbako,ya nwere a zuru ezu elu akụrụngwa usoro nke na-eme ígwè owuwu na ogwe. Ya mere, anyị nwere ike ijide n'aka na ezi mma na-asọmpi price.
Ebe ọ bụ na-abanye na mba ahịa, anyị aghọwo mmekọ nke ọtụtụ mba ọzọ trading companies.Partner si Israel we,"Anyị na-ahọrọ na ị bụghị nanị n'ihi na nke price na àgwà,ma ọrụ gị na ezi obi kwesịrị ka m pụrụ ịdabere na enyi. "
Olee banyere gị àgwà akara?
First,anyị ngwaahịa agafeela OA EN1090 na ISO9001:2008,nke pụtara anyị ngwaahịa a nwalere site nke atọ party.And tupu ya etinye n'ime mmepụta,niile nke ngwaọrụ a ga-nwalere n'ime advance.During mmepụta,anyị nwere usoro nke nhazi index akwụkwọ, ọrụ na-emejuputa atumatu dị ka ụkpụrụ na esịn idem ese enyịn àgwà akara personnel.After mmepụta,anyị nwere injinia na-elele àgwà na-ewere ọrụ maka nke a.
Olee otú iji nweta a see okwu si gị?
Ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị n'oge ọ bụla site Email, WhatsApp, Skype na ọ bụla ọzọ ụzọ,na-enye anyị ụfọdụ ihe ọmụma bụ isi,dị ka kpọmkwem size nke ụlọ,na size na nke ukwu nke ụzọ na windo,ihe ị chọrọ iji n'ihi na mgbidi na roof.After na,anyị nwere ike inye gị ihe ndika price na 30 minute.If mkpa ka ị mara ihe nkọwa,ka-atụle ihe.
Nwere ike ị na-enye imewe ọrụ?
Ee,na anyị nwere engineer otu na ike chepụta gị dị ka gị requirements.Architectural ịbịaru,Ọdịdị esereese,nhazi zuru ezu ịbịaru na nwụnye ịbịaru ga-mere ka ị na akwado dị iche iche oge nke oru ngo.
Gịnị bụ nnyefe oge?
The nnyefe oge na-adabere na size na nke ukwu nke building.Generally n'ime 30 ụbọchị ke ama ọkọbọ payment.And ele mmadụ anya n'ihu Mbupu na-ekwe maka nnukwu iji.
Ị na-enye ọrụ maka echichi?
Yes.We na-enwe ihe echichi otu abroad.Firstly,echichi Eserese a ga-enye tupu ngwongwo na-abata na ebe port.If gị mkpa,anyị pụrụ ime ndokwa injinia ime ntụziaka na oru ngo site.For nnukwu oru ngo na ahịa 'chọrọ,anyị nwere ike inye a dum oru ngo otu.
Gịnị bụ ugwo okwu?
30% nkwụnye ego na 70% itule tupu Mbupu.
Copyright © Nantong GAOYA ígwè Structure CO., LTD.. Ikike niile echekwabara.